AbakwaTaliban bathatha imali eyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi nambili kanye negolide kulabo ababeyizikhulu zabo, bayibuyisela ebhange likazwelonke
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-Afghanistan Breaking » AbakwaTaliban bathatha imali eyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi nambili kanye negolide kulabo ababeyizikhulu zabo, bayibuyisela ebhange likazwelonke
Izindaba ze-Afghanistan Breaking • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ubugebengu • Izindaba zikaHulumeni • Human Rights • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
AbakwaTaliban bathatha imali eyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi nambili kanye negolide kulabo ababengabaphathi, balibuyisela ebhange likazwelonke
Izimali nemali yegolide itholwe ngabakwaTaliban ezindlini zezikhulu ezaziphethe i-Afghanistan kanye namahhovisi endawo ophiko lwezobunhloli lukahulumeni futhi zibuyiselwe kumgcinimafa weDa Afghanistan Bank, kusho ibhange esitatimendeni.
AbakwaTaliban bathatha imali eyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizinkulungwane eziyizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi nambili kanye negolide ezindlini nasemahhovisi abaphathi bezokuphepha base-Afghanistan.
Izimpahla ezibanjiwe zinikezwe izikhulu zeTaliban zanikela ngeDa Afghanistan Bank okuyibhange elikhulu laleli lizwe.
Ngokwesitatimende sebhange, ukunikezelwa kwempahla kukhombisa ukuzibophezela kweTaliban ekusebenzeleni izinto obala.
IDa Afghanistan Bank (DAB), okuyibhange eliphakathi nezwe, ikhiphe isitatimende namhlanje imemezela ukuthi iTaliban inikeze imali ebalelwa ezigidini eziyi-12.3 zamadola aseMelika kanye negolide kwezinye izikhulu zaleli bhange.
"Izikhulu ze-Islamic Emirate of Afghanistan ngokunikela ngempahla kumgcinimafa kazwelonke zikhombisile ukuzibophezela ekwenzeni izinto obala," IDa Afghanistan BankKusho isitatimende.
Ngemuva kokuthatha inhlokodolobha iKabul ngo-Agasti 15, i I-Taliban umemezele ukusungulwa kukahulumeni ozobamba izintambo ngoSepthemba 7, waqoka ongqongqoshe abambalwa kanye nomphathi osabambile ebhange elikhulu lase-Afghanistan.
IDa Afghanistan Bank yibhange elikhulu lase-Afghanistan. Ilawula yonke imisebenzi yasebhange neyokuphatha imali e-Afghanistan. Ibhange njengamanje linamagatsha angama-46 ezweni lonke, kanti amahlanu kulawa aseKabul, lapho nendlunkulu yaleli bhange lizinze khona.
The I-Taliban bathathe amandla e-Afghanistan emasontweni amabili ngaphambi kokuba i-US ibekelwe ukuqeda ukuhoxiswa kwayo kwamasosha ngemuva kwempi ebiza iminyaka eyishumi nambili.
Abavukeli bahlasele izwe lonke, bathatha wonke amadolobha amakhulu ezinsukwini ezimbalwa, njengoba amabutho ezokuphepha e-Afghanistan aqeqeshwa futhi ahlonyiswa yi-US kanye nabalingani bayo bancibilika.
OwayenguMongameli wase-Afghanistan u-Ashraf Ghani wazithela ngabandayo futhi wakhipha izitatimende ezimbalwa esidlangalaleni ngesikhathi amaTaliban ehlasela izwe lonke. Ngenkathi amaTaliban efika enhlokodolobha yaseKabul, uGhani wabaleka e-Afghanistan, okusolwa ukuthi unemali eyizigidi ezingama- $ 169 emali ephangiwe, ethi ukhethe ukuhamba ezweni ukugwema ukuchitheka kwegazi okuqhubekayo.
AmaTaliban afune ukuzibonakalisa njengamandla alinganiselayo eminyakeni yamuva. Selokhu bathathe izintambo, bathembise ukuhlonipha amalungelo abantu besifazane, bathethelele labo abalwa nabo futhi bavimbele i-Afghanistan ukuthi isetshenziswe njengesisekelo sokuhlaselwa kwamaphekula. Kepha abantu abaningi base-Afghani bayangabaza ngalezo zithembiso.